Lignano — sezulu ngenyanga, lokushisa lamanzi
World Resorts Amazwe Italy Lignano
Isilinganiso esiphezulu lokushisa nsuku zonke — 30°C August. Isilinganiso esiphezulu lokushisa ebusuku — 19.2°C August. Isilinganiso esincane lokushisa nsuku zonke — 7.1°C e January. Isilinganiso esincane lokushisa ebusuku — 2.8°C e January.
Isilinganiso lokushisa esiphezulu of the amanzi — 25.9°C fixed August. Isilinganiso lokushisa okungenani amanzi — 9.1°C fixed February.
Kwezulu Maximum — 133.2 mm Lalotshwa November. Kwezulu Minimum — 54.1 mm Lalotshwa August.